Wasaaradda arrimmaha dibadda oo dabooshay qoraalladii ololihii QM - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiiradda arrimmaha dibadda Sweden Margot Wallström oo ku sugan golaha ammaanka QM. sawir: Pontus Lundahl/TT
Wasaaradda arrimmaha dibadda oo dabooshay qoraalladii ololihii QM
La cusbooneeyay måndag 4 december 2017 kl 12.55
La daabacay måndag 4 december 2017 kl 11.47
Baaris uu sameeyay war-geeyska maalinlaha ee Dagens Nyheter (DN) ayaa lagu sheegay in wasaaradda arrimmaha dibaddu qarisay qoraallo 900 oo bog ka kooban oo ey ku yaalaan xog la xiriirta ololihii uu dalka Sweden u galay kursiga golaha ammaanka ee hayadda caalamiga ee Qarammada Midoobey (QM).
Bishii juun ee sannadkii 2016 ayay ahayd kolkii uu dalka Sweden ku guuleeystay inuu ku fariisto kursi ka mid ah kuraasta golaha ammaanka ee hayadda caalamiga ee QM. War-geeyska DN oo baaris ku sameeyay ololihii tartanka ee kursiga ayaa maanta daabacay in wasaaradda arrimmaha dibadda Sweden ay qarisay qoraallo ka kooban 900 oo bog ee la xiriira howlihii ololaha.
Safaarradaha Sweden u fadhiya dalka dibaddiisa waa hayado gaar ah waajibna ay tahay in xogta iyo qoraallada ey is dhaafsadaan la diiwaan geliyo. Hase yeeshee muddo sannad gaarsii-san ey howl-wadeennada wasaaradda arrimmaha dibadda iyo howl-wadeennada safaarraduhu xogta isku dhaafsaneyeen nidaam ka duwan oo barbar socday. Tallaabadaasina oo ay ula muuqatay wasaaradda arrimmaha dibaddu qiimeeyeen qoraallo shaqo, sida uu war-geeysku qoray.
War-geeyska Dagens Nyheter oo wasaaradda wax ka weeydiiyay qoraal-hoowleedyadii ayay u caddaatay in aan la diiwaan-gelin, balse gadaal laga diiwaan geliyey sannad dabadii, sida war-geeysku uu qoray. Nils Funcke, oo culuunta xuquuqda saxaafadda ka dhiga jaamicadda Stockholm ayaa dhaleeceeyn dusha kaga tuuray falkaa.
–Waa arrin lala fajaco. Ma ahan markii ugu horreeysay ee wasaaradda arrimmaha dibaddu, iyada oo la kaashneeysa hayado kale ku tuntaan xeer dastuurka ku cad oo waajib ku ah iney u hogaan-samaan, sida uu sheegay Nils Funcke.
Dhanka kale sida ay ku caddaatay baaris uu wado guddi-hoosaadka baarlamanka ee dastuurku inay wasaaradda arrimmaha dibaddu lumisay qoraallo badan ee salka ku haya xiriirka ay la leedahay hayado caalami ah, sida uu qoray war-geeyska DN.
Guddoomiyaha guddi hoosaadka dastuurka Beatrice Ask, kana tir-san xisbiga Moderaterna ayaa sheegtay in guddi hoosaadku ogaaday iney maqan yihiin qoraallo badan, kolkii la waday baaris la xiriirtay qoraallada sirta ah.
–Waxaa noo caddaatay in qoraallo badani ey maqnaayeen, kolka laga yimaado kuwa la heley.
Xaggeey sheegtay wasaaraddu iney ka baxeen qoraalladaasi?
–War kama hayaan, wax jawaab ah nalagama siin arrimmahaa. Laba jiiro ayaannu qoraallo is dhaafsanney, bal aannu aragno in aannu ku qanacno jawaabaha nala siiyey, sida ay sheegtay Beatrice Ask.
Wasiirka arrimmaha dibadda Sweden Margot Wallström (S) ayaa sheegtay in aanu falkaasi ka dambeeyn ula kac.
Qoraal jawaab ah oo wasiiraddu gaarsiisay war-geeyska Dagens Nyheter ayay ku sheegtay inuu falkaasi ka dambeeyay howsha oo aan sidii ay ahayd loo qaban:
"Oraahda in wasaaraddu si ula kac ah xogta u qarisay ayaan ahayn mid dhab ah."
Wallström ayaa sidoo kale sheegtay inay madaxa laanta shuruucda ee wasaaradda ku howl-gelisay sidii uu/ay ku sameeyn lahayd guddi howleed ka gun gaara arrinkaa iyo howlaha loo baahan yahay sidii looga hor tegi lahaa".